Halloween waa maalin fasax ah in aan diyaariyo naxdintii lama filaan ah oo kadis ah qoyska, saaxiibada iyo qaraabada. Waa maxay qorshahaaga? Waa hagaag, in ay u dabaal maanta waa weyn, waa fikrad aad u fiican in aan qabto qaar ka mid ah kulan spooky ee dhinacyada. Hoos waxaan ku soo ururin qaar ka mid ah fikradaha xisbiga Halloween caruurta, taas oo ka dhigi doonaa xisbiga Halloween funnier.
1. Garo Yaa Game
Tani waa ciyaar qosol bilowga ah ee xisbiga. Marka martida walba gaaray, waxaad siin kartaa warqad duubay ay dib-kas Halloween ama wax qoran oo ku saabsan. Ujeeddada cayaarta waxa uu martida walba inaad ogaato cida ay yihiin.
Qof kasta oo ku dhawaad ​​tagaa oo wuxuu ku weydiinayaa su'aalo ku marti sharaf kale oo ku saabsan qof qarsoodiga ama shay.
Guests kaliya haa ama maya jawaabi kara su'aalaha.
2. Erayga hayey Game
Raadinta kulan gaar ah Halloween? Isku day inaad tan Game Halloween Word hayey. Fun oo fudud!
Sii ciyaaryahan kasta gobal warqad la sii dheer, hadal Halloween la xiriira sare ee bogga, sida Halloween, scarecrow, ama Frankenstein, ECT.
Calan u ah waqtiga ku kooban 1 - 3 daqiiqo oo daya sida dheer erayo badan, ugu yaraan 3 warqado, waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo kaliya ka qaadeen warqadihii, erayga dheer.
3. Macmacaanka ee madow ah
Xisbiyada Halloween waxaa ka buuxa naca - shukulaatada, isagu calyanaqsiga wuu midho, caramels ... Samee play buuxa ee doorashada nacnac iyo aad u isticmaasho mid ka mid ah kulamada inoo jecel Halloween xisbiga, "Macmacaanka ee madow ah
Indho-saab labo ciyaaryahan, oo iyaga kasta siin jiray xabbad nacnac ay u dhadhamiyaan. Yaan la siin nacnac la mid ah ama dhadhan.
U sheeg ciyaartoyda in la garto nooca sidoo kale ka mid ah bar nacnac ama midabka / dhadhan ah, haddii ay nacnac miro. Ciyaaryahankii ugu horeeyay ee si aad u hesho waxa qaldan waa ka baxay, iyo ciyaaryahanka cusub qaadataa meesha. Ciyaaryahankii ugu horeeyay ee si aad u hesho shan guul oo ah sax oo isku xigta.
4. Bocor Golf
Waa ciyaar qosol leh. Inaan samayno oo dhan waa inay ku dhuftay kubada golf soo galeen bocorka ah. Sidaas ciyaarta ka hor, kana qoranaysaan bocorka iyo in la sameeyo afka dheeraad ah oo waaweyn. Sharooto sagxada si ay dhulka ugu xasiloonida.
Waxaad calaameysaa Bar bilaw dhowr cagaha laga bilaabo bax ah. The ka weyn carruurta, iska socday.
Ciyaaryahan kasta uu helo inay ku dhuftay kubada golf ah saddex jeer.
Mar kasta oo uu aado kubada galay bocorka ah, ciyaaryahanka ku guuleystay goosin ka mid ah nacnac.
5. Gross cuskato Bag
Farxaddii xisbiga Halloween waa in ay gaaraan galay, oo aan u tijaabin cabsida oo ka soo bax wax farxad dhamaadka. Sidaas kulankaan waa qumman yahay caruurta!
Ku duub alaabta yar ama abaalmarino in faashad si looga hortago is waxyeelo halka ay ku dhuumanayaan ku-Jell o.
Buuxi baaquli ama baaldi la Jell-o oo ah meesha alaabta yar gudaha, daryeelka si ay u qariyaan iyaga oo qoto dheer ee ku-Jell o. Indho-saab ciyaaryahanka si ay u ma arko waxa ay galeen walbo ay gacanta, ku wareegsan ayna miiqdaan oo aad weydiisan kartaa inay ku gaadho iyo soo qaato abaalmarinta.
Waxaan hubaa in fikradahan ciyaarta Halloween caruurta iyaga ka dhigi doonaa faraxsan in dhinacyada. Gan videos funny ah caruurta iyo ka dhigi video Halloween ah la software sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) Waa fikrad fiican in aad sii xasuusta qiimaha badan. Just heli bilaabay oo wuxuu ku raaxaysan Halloween ka spooky.
> Resource > Game > Top 5 Halloween xisbiga Games for Kids